10. Purejāta Paccaya | Dhamma Training Center
Aug 23 rd, 2020
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၁၀ – ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition)PDF Filele
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၁၀ – ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition)...
Mar 29 th, 2020
၁၀။ ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) PDF File
၁၀။ ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) PDF File 10-Purajata (update) 29.3.2020...
Mar 12 th, 2020
၁၀။ ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccaya (Prenascence condition) (1 of 7)
၁ – ကုသလတ္တိက ၇ – ပဥှာဝါရ ၁ – ပစ္စယာနုလောမ ၁ – ၀ိဘင်္ဂ၀ါရ ၁၀။ ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccaya (Prenascence condition) Purejātapaccayo Paccayaniddeso Purejātapaccayoti...
Purejātapaccayo Pañhāvāro Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa purejātapaccayena paccayo. ārammanhapurejātamh, vatthupurejātamh. Ārammanhapurejātamh – arahā cakkhumh aniccato dukkhato anattato vipassati. Sotamh…pe… ghānamh…pe… jivhamh…pe… kāyamh…pe… rūpe…pe…...
၁၀။ ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (3 of 7)
၁၀-ပုရေဇာတပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိ zawgyi ၄၂၄။ အဗျာကတော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော အာရမ္မဏ ပုရေဇာတံ၊ ၀တ္ထုပုရေဇာတံ။ အာရမ္မဏပုရေဇာတံ အရဟာ စက္ခုံ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ၀ိပဿတိ။ သောတံ။ ပ။ ဃာနံ။...
၁၀။ ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (4 of 7)
၁၀-ပုရေဇာတပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိနှင့် မြန်မာ zawgyi ၄၂၄။ အဗျာကတော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ဗျာ၊ ဗျာ-၁) အဗျာကတတရားသည် အဗျာကတတရားအား ပုရေဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ အာရမ္မဏပုရေဇာတံ၊ ၀တ္ထုပုရေဇာတံ။ ပုရေဇာတပစ္စည်းတွင် – ၁။...
၁၀။ ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (5 of 7)
၁၀။ ပုရေဇာတပစ္စယော ဘ၀နှင့် ပဋ္ဌာန်းသင်ခန်းစာ ပုရေ = ရှေးဦးစွာ၊ ဇာတ = ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ပစ္စယ = အကြောင်းတရား။ ရှေးဦးကြိုတင်ဖြစ်ပေါ်သည့် အကြောင်း တရားဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ Prenascence – condition တနည်း Born...
Everything changes, Nothing remains without change. zawgyi Everything changes, Nothing remains without change. ဟူသော မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမအတိုင်း မြစ်ရေများ မနားတမ်း တစ်သွင်သွင် စီးဆင်းနေသကဲ့သို့ ရုပ်ဓမ္မ နာမ်ဓမ္မအစဉ်သည်လည်း...
စက္ခုပသာဒ မျက်စိရုပ်ကလည်း ပရမတ် zawgyi ရူပါရုံအဆင်းကလည်း ပရမတ် ဖြစ်ပါသည်။ မြင်သိစိတ်ကလည်း ပရမတ် ဖြစ်ပါသည်။ ရူပါရုံနှင့် စက္ခုပသာဒ တို့သည် ပင်ကိုယ်သဘောအားဖြင့် ဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲနေပေသည်။ သူလိုကိုယ်လို သာမာန်လူသားတစ်ယောက် အနေဖြင့် ဤသို့ခိုင်မြဲမှုမရှိ၊ အနှစ်သာရမရှိသော ဓမ္မသဘာဝတရားသက်သက်ကို...
Dec 18 th, 2019
၁၀- ပုရေဇာတပစ္စယော PDF Purejāta Paccayo (Prenascence condition)
၁၀- ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) PDF file...
Dec 16 th, 2019
၁၀- ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (1 of 5)
၁၀- ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (1 of 5) Number ten is Purejata Paccaya. ‘Pure’ means before. ‘Jata’ means arisen. So ‘Purejāta’...
၁၀- ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (2 of 5) zawgyi ၄၂၄။ အဗျာကတော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ အဗျာကတတရားသည် အဗျာကတတရားအား ပုရေဇာတပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ...
၁၀- ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (3 of 5)
၁၀- ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (3 of 5) zawgyi အညွှန်း (က-၁) ပုရေ=ရှေးဦးစွာ၊ ဇာတ=ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ပစ္စယ=အကြောင်းတရား။ ရှေးဦးကြိုတင်ဖြစ်ပေါ်သည့် အကြောင်းတရား။ Prenascence – condition တနည်း Born...
၁၀- ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (4 of 5) zawgyi ဆဲလ် Cell ဟူသော ကလပ်စည်း (ဃ-၁) ယနေ့သိပ္ပံပညာ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွင် သာမန်မျက်စိဖြင့် မမြင်မတွေ့နိုင်လောက်အောင်ပင် အလွန့် အလွန်သေးငယ်သည့် အဏုမြူဓာတ်မှုန်များဖြင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို...
Dec 13 th, 2019
၁၀- ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (5 of 5) zawgyi ရုပ်သက်တမ်းနှင့် စိတ်သက်တမ်း (ဈ-၁) ဤနေရာတွင် ရုပ်၏သက်တမ်းနှင့် စိတ်၏သက်တမ်းတို့ကို ထပ်မံ၍ ပြဆိုပါဦင်္းမည်။ ရုပ်၏ သက်တမ်းသည် စိတ္တခဏ ၁၇-ချက်(၀ါ) =...